Kongoon hidha anniisaa elektiriikaa addunyaa guddicha ijaaruuf waliigalte - BBC News Afaan Oromoo
Kongoon hidha anniisaa elektiriikaa addunyaa guddicha ijaaruuf waliigalte
Goodayyaa suuraa Kongoon hidha aanniisaa elektiriikaa guddicha addunyaa ijaaruufi
Rippabliki Dimookiraatawaa Koongoo proojeektii guddicha addunyaa bishaan irraa anniisaa eleltirikii maddisisu doolaara ameerikaa biiliyoona 14 ijaaruuf kaampaniiwwan Chaayinaa fi Ispeen waliin waliigaltee mallatteesite.
Projeektiin moggaasa hidha Ingaa jedhamu qabu kun ijaarsi isaa waggoota booda wayita xumuramu anniisaa elektirikii meegaawattii 11,000 maddisiisa jedhameera.
Hidhi kun laga guddicha Kongoorraa annisaa elektiriikii maddisiisuuf hayyama argame isa xumuraa ta'uu baatus mootummaan tarkaanfii guddaadha jedheera.
Baqattoonni Kongoo 40 koleraan du'an
Mormii Kongootti taasifameen lammiileen ajjeefaman
Waliigaltee ''exclusive development agreement'' jedhamu Kongoon kaampaniiwwan lameen waliin mallatteesiteen caalbaasii bahuun dura kaampaaniwwan Chaayinaa fi Ispeen kun projeektichaaf maallaqa ta'u walitti qabuu eegalaniiru.
Lammiilee biyyattii keessaa carraa annisaa elektiriikitti fayyadamuu kan argatan harka 10 qofa. Projeektiin kun yoo xumuramu dhiyeessii annisaa fooyyeessuun seektara albuudaa biyyattiis ni deeggara jedhamee abdatama.
Baankiin addunyaa bara 2013tti hirmaannaa hidha kanaa keessaa sababa garaa garaan harka baafateera.
Gareeleen dhaabbilee siiviilii proojektiin kun pireezidantii biyyatti mormiin irratti ka'u Joseef Kabiilaan waan hoogganamuufi dhiibbaa naannoorran gahu mala jechuun projekticha mormaa jiru.
Hidhi Ingaa 3 anniisaa biyyoota ollaa biroottis gurguruurratti kan xiyyeefate yoo ta'u waliigaltee bara 2013 raawwatameen Afrikaan Kibbaa meeggaawaattii 2,500 bituuf waliigaltee ture.
Sarara anniisaa kana baatee dabarsu diriirsuunuu dabalataan doolaara biiliyoona 4 gaafata.
Baqattoonni Kongoo 40 koleeraan du'an
Loltoonni Kongo Paarkii biyyattii Virungaa keessatti ajjeefaman